‘अब बीमा सेवा निर्यात गर्नुपर्छ’ – Banking Khabar
‘अब बीमा सेवा निर्यात गर्नुपर्छ’
बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालले वस्तु व्यापारमा मात्र नभएर सेवा व्यापारमा पनि घाटा व्यहोरेको भन्दै सेवा निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । बीमा समितिको ५०औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै डा. खतिवडाले वित्तीय सेवातर्फको घाटा कम गर्न बीमा सेवाको निर्यातलाई बढावा दिनुपर्ने बताए । ‘पुनर्बिमा मार्फत सेवा बढी नै आयात गरिरहेका छौँ,’उनले भने, ‘अब बीमा सेवा निर्यात गर्नुपर्छ ।’ यसमा बीमा कम्पनीहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, नेपालकै बीमा कम्पनीहरु पुनर्बिमा कम्पनीमा सेयरहोल्डर हुनुहुन्छ, तपाईँहरु सबैले बीमा सेवा निर्यात गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।’
समारोहमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले बीमाको विस्तारममा बीमा समितिबाट कदमहरु चालिएतापनि पर्याप्त नभएको बताए । उनले भने, ‘बीमा समितिका केही कदमहरुका कारण बीमा चेतनाको अवस्था सुधारात्मक देखिएको छ । यद्यपि, अझै पनि पर्याप्त छैन ।’ बीमाको पहुँच बढाउनका लागि बीमाको दाबी भुक्तानी लिने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने र बीमाको महत्वका बारेमा बुझाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बीमाले जोखिम व्यवस्थापन गरी भविष्य सुरक्षित बनाउँछ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेमा बीमा पहुँच १० प्रतिशतबाट माथि उठ्ने उनले बताए । बीमा शिक्षा अभिवृद्धि र पहुँच विस्तारमा बीमा अभिकर्ताको भूमिका सबैभन्दा ठूलो हुने भएकाले बीमा अभिकर्ताहरुलाई राम्रो तालिम र सुविधा दिएर प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सके बीमा पहुँचको अवस्था केही वर्षमा नै २० प्रतिशत पुर्याउन सकिने उनको दाबी छ ।
बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईँले २००४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापना भएपछि उसकै नेतृत्वमा नेपाल इन्स्योरेन्सको स्थापनासँगै नेपालमा औपचारिक रुपमा बीमाको सुरुवात एको जानकारी दिए । उनले हालसम्म जीवन बीमाको पहुँच १० प्रतिशत पुगेको र अर्थतन्त्रमा बीमा क्षेत्रको योगदान २.३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे । पुँजी वृद्धिका लागि असारमसान्तसम्मको समय दिइएकोमा सबै बीमा कम्पनीले क्यापिटल प्लान बुझाएको र केही कम्पनीले चुक्तापुँजी पुयाएको उल्लेख गर्दै उनले सबै कम्पनीले समयमा नै पुँजी पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, पछिल्लो समय जीवन र निर्जिवन गरी १२ वटा बीमा कम्पनी थपिएको जानकारी दिँदै उनले यसबाट १५ सयले प्रत्यक्ष र हजारौँले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएको बताए । त्यस्तै, हाल नेपालमा चारवटा संयुक्त लगानीका बीमा कम्पनी र तीन वटा विदेशी बीमा कम्पनीका शाखा रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कम्पनीका कारण बीमा क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सहज भएको जिकिर गरे । यसबाहेक, बीमा समितिले उत्पादनमा आधारित कृषि बीमा नीति, एक करोडको बीमा प्रवद्र्धन कोष स्थापना लगायत थुप्रै कदमहरुमार्फत बीमा क्षेत्रको सुदृढीकरणतर्फ लागीपरेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमन पौडेलले हाल १० प्रतिशत रहेको बीमा पहुँचलाई असार मसान्तसम्ममा ११ प्रतिशत र पाँच वर्षभित्रमा दोब्बर पुर्याउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए । त्यस्तै, फागुन मसान्तसम्ममा कुल बीमा रकम ५० अर्ब संकलन भएकोमा असार मसान्तसम्म यस्तो रकम ७० अर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको बताए । फागुन मसान्तसम्ममा कृषि बीमाबाट आठ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ संकलन भएको पनि उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, भुकम्पको दाबी भुक्तानी ९५ प्रतिशत पुुगेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर कार्यक्रममा बीमा समितिका पूर्वअध्यक्षहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । त्यस्तै, २० वर्षको कार्यावधि सकेर अवकाश भएका कर्मचारीलाई समेत कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो ।